उमेर हदबन्दी तोकिएसँगै अध्यक्षका प्रमुख दाबेदार आउट, नेविसंघको नेतृत्वमा अब ककसको दाबी? :: PahiloPost
उमेर हदबन्दी तोकिएसँगै अध्यक्षका प्रमुख दाबेदार आउट, नेविसंघको नेतृत्वमा अब ककसको दाबी?
8th October 2018, 04:07 pm | २२ असोज २०७५
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)मा ३२ वर्षे उमेर हदबन्दी लागु भएसँगै १२ औँ महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रमुख दाबेदार मानिएका नेताहरु रिङ आउट हुने भएका छन्।
आइतबार राति सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले ३२ वर्षे उमेर सम्बन्धी सो व्यवस्था कायम रहने संघको विधानको व्यवस्था पारित गरेपछि वर्तमान कार्यसमितिमा रहेका धेरै नेताहरु विद्यार्थी राजनीतिबाट आउट हुने भएका हुन्।
आउट हुनेमा सभापति शेरबहादुर देउवा निकटका वर्तमान कार्यसमितिका उपाध्यक्ष पुष्पकुमार शाही र पूर्वउपाध्यक्ष ऋषिकेशजंग शाह, उपसभापति विमलेन्द्र निधिनिकट महामन्त्री सरोज थापा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल गुटबाटका मनोजमणि आचार्य, हिमालदत्त श्रेष्ठ र दीपक भट्टराई, महामन्त्री डा. शशांक कोइरालानिकट उर्मिला थपलिया, निलकण्ठ रिजाल, पूर्व महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला गुटबाटका उपाध्यक्ष नवीन राई र महामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले रहेका छन्।
अब अध्यक्षमा कसको दाबी?
उमेर हदबन्दी तोकिएसँगै प्रत्यक्ष फाइदा सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतनिकटका प्रेमराज जोशीलाई पुगेको छ। उनको विकल्प खेजिएको खण्डमा सहमहामन्त्री अम्बिका चलाउनेलाई संस्थापन पक्षले अध्यक्षका लागि अघि सार्ने देखिन्छ।
यस्तै पौडेल गुटबाट हालका कोषाध्यक्ष शिव रिमाल वा डा. कोइरालानिकट सागर परियारलाई अघि सार्ने देखिएको छ। यता सिटौला गुटलार्इ भने ३२ उमेर हदबन्दीले अध्यक्षको उम्मेद्वार छनोटमा सकस पर्ने देखिएको छ । जसका सुशील भट्ट, डोजाङ शेर्पा, नवराज त्रिपाठी र गणेश सापकोटा अध्यक्षका आकांक्षी रहेका छन्।
नेविसंघको १२ अाैँ महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुने नहुने नेविसंघकै पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले शंका व्यक्त गर्न थालेका छन्। निर्धारित कार्यातालिका अनुसार कुनै काम नभएको र चाडको बिचमा महाधिवेशन मिति तोकिएकोले महाधिववेशन अनिश्चित भएको उनीहरुले आशंका व्यक्त गर्न थालेका हुन्।
नेविसंघका प्रवक्तासमेत रहेका सहमहामन्त्री जोशीले यसअघि नै अध्यक्षमा उम्मेदवारी दाबी गरिसकेका छन्। उम्मेदवारी दाबी गर्दै उनले भने, 'पार्टीले उमेर हदबन्दी हटाएसँगै नेविसंघ युवा विद्यार्थीको नेतृत्वमा आउने पक्का भएको छ। त्यसैले मैले अध्यक्षमा दाबेदारी पेश गरेको हुँ।' अध्यक्षमा दाबी पेश गरिए पनि समयमै महाधिवेशन हुनेमा भने उनले शंका व्यक्त गरे।
गत भदौ २ गते नैनसिंह महर नेतृत्वको कार्यसमितिको म्याद सकिएपछि कातिक १६ बाट काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने गरी मिति तोकिएको थियो। 'निर्धारित मितिमा महाधिवशेन हुने देखिँदैन,' नेविसंघका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, 'महाधिवेशन अनिश्चित गराएर टीका प्रथाबाटै नेतृत्व छानिने सम्भावना बढेको छ।
नेविसंघमा उमेरहदको प्रसंग विगतदेखिनै उठँदै अाएकाे हाे। नेविसंघका पुर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा हाल नेपाल तरुण दलका महासचिव भुपेन्द्रजंग शाहीले २०६३ सालतिर याे विषय उठाएका थिए। शाहीले विद्यार्थीकाे नेताले नेविसंघको नेतृत्व गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए। अबको नयाँ व्यवस्थाले त्याे अवस्था ल्याएकाेमा उनले खुसी व्यक्त गरे।
उमेर हदबन्दी तोकिएसँगै अध्यक्षका प्रमुख दाबेदार आउट, नेविसंघको नेतृत्वमा अब ककसको दाबी? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।